Kutheni Kukho Iimvaba ZobuKristu Ezininzi Kangaka? | Imibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVenda IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Kutheni Kukho Iimvaba ZobuKristu Ezininzi Kangaka?
Abantu baye basebenzisa iimfundiso zikaYesu Kristu ukuze benze iimvaba ezahlukahlukeneyo abathi zezobuKristu. Kodwa ke, iBhayibhile ithi lunye kuphela uhlobo lokwenene lobuKristu. Kutheni sisitsho? Makhe sibone ezi zizathu zintathu.
UYesu wathi ufundisa “inyaniso,” ibe amaKristu okuqala ayesithi unqulo lwawo ‘yinyaniso.’ (Yohane 8:32; 2 Petros 2:2; 2 Yohane 4; 3 Yohane 3) La mabinzana asibonisa ukuba abo bafundisa izinto ezingqubanayo neemfundiso zikaYesu, abakho kuhlobo lokwenene lobuKristu.
IBhayibhile ifundisa ukuba onke amaKristu afanele ‘athethe ngokuvumelanayo.’ (1 Korinte 1:10) Kodwa, iimvaba zobuKristu ezininzi azivumelani nangeyona mfundiso engundoqo yokuba kuthetha ukuthini ukuba ngumKristu. Ezo mvaba azinakuba zichanile zonke.—1 Petros 2:21.
UYesu waprofeta ukuba baninzi abantu ababeya kuthi bangamaKristu kodwa bahluleke ukuthobela imiyalelo yakhe, ibe wathi soze abamkele abantu abanjalo. (Mateyu 7:21-23; Luka 6:46) Abanye babeya kulahlekiswa ziinkokeli zonqulo ezingxenga unqulo lokwenene ukuze zenze ukuthanda kwazo. (Mateyu 7:15) Sekunjalo, abanye babeya kukhetha ukulandela uhlobo lobuKristu olungachananga kuba nje lubaxelela le nto bafuna ukuyiva kunokuba lubafundise inyaniso yeBhayibhile.—2 Timoti 4:3, 4.
Kumzekeliso wakhe wengqolowa nokhula, uYesu wachaza kwangaphambili ukuba abantu abaninzi babeya kuwexuka kubuKristu. (Mateyu 13:24-30, 36-43) Kwakuya kugqitha ithuba elide ungabonakali umahluko phakathi kwamaKristu okwenene namaKristu obuxoki. Nyhani ke, kwathi emva kokufa kwabapostile, lwaqalisa uwexuko. (IZenzo 20:29, 30) Nangona zinokwahluka iimfundiso zowexuko, lonke uhlobo lobuKristu olungachananga ‘luye lwaphambuka enyanisweni.’—2 Timoti 2:18.
UYesu waphinda wachaza ukuba kwakuza kufika ixesha lokuba ucace umahluko phakathi kwamaKristu okwenene nawobuxoki. Le nto iye yenzeka kule mihla yethu, kweli xesha ‘lokupheliswa kwenkqubo yezinto.’—Mateyu 13:30, 39.